Degso Avast Free Antivirus 2021 loogu talagalay Windows
Degso Avast Free Antivirus 2021
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (0.22 MB)
Degso Avast Free Antivirus 2021,
Avast Free Antivirus, oo bixisa nidaamka difaaca fayraska bilaashka ah ee kombiyuutarada aan ku isticmaalnay guryaheena iyo goobaha shaqada sanado badan, ayaa la soosaarayaa oo laga cusbooneysiinayaa hanjabaadaha dalwaddii.
Kumbiyuutar kasta oo isticmaala internetka, wuxuu ku jiraa shabakad xitaa haddii uusan ku xirneyn internetka, kuma xirna shabakad kasta ama internetka, wuxuu leeyahay halista virus. Avast Free Antivirus, oo aan kugula talin karno inay tahay barnaamij antivirus ansax ah si looga badbaado khatartaan soo food saartay, ayaa aad ugu guuleysatay aqoonsiga viruska iyo ka saarista viruska. Avast Free Antivirus waxaa ku jira mishiinkiisa falanqaynta viruska iyo mishiinka falanqaynta viruska ee AVG. Tani waxay kordhinaysaa heerkaaga amniga.
Sidee loo rakibaa Avast?
Waxaan isku daynay inaan sharaxaad ka bixinno sida loo rakibo Avast Free Antivirus, oo ka mid ah barnaamijyada antivirus-ka ee aadka loo isticmaalo kombiyuutarada, fiidiyaha hoose:
Avast Free Antivirus wuxuu ka kooban yahay xubno kala duwan. Cunsurka CyberCapture waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay maskaxda aqoonsiga fayraska ee sameeya laf-dhabarta barnaamijka. Gaashaanka Dabeecadda, dhanka kale, wuxuu hubiyaa in kombiyuutarkaaga si joogto ah loola socdo dhaqdhaqaaqyada laga shakiyo. Avast Password Vault kaliya kaa caawin mayso inaad sirtaada sir noqoto, laakiin sidoo kale waxay kaa badbaadineysaa dhibaatada gelitaanka erayga sirta ah markasta oo aad internetka dhex mushaaxeysid. Nadiifinta Avast Browser ayaa nadiifisa biraawsarkaaga, kaa xoreeysaa kumbuyuutarrada aan loo baahnayn ee lagu beddelayo mashiinka raadinta asalka ah iyo bogga guriga. Isbatooraha Avast Wi-Fi wuxuu hubiyaa amniga shabakaddaada wireless. Smart Scan, laga bilaabo furayaasha sirta ah ee aan aaminka ahayn illaa xumaan-ku-rakibidda illaa softiweerka waqtigiisu dhammaaday oo hal sawir lagu baaro; waxay heshaa nuglaansho u oggolaanaya khayaanada inay soo galaan nidaamka.Thanks to Software Updater-ka, dhammaan barnaamijyada lagu rakibay kombuyuutarkaaga had iyo jeer waa la cusbooneysiiyaa. Samatabbixinta Disk, oo ah habka ugu fudud ee looga takhalusi karo fayrasyada waxtarka leh ee si qoto dheer u dhex geli kara nidaamkaaga oo xitaa bilaabi kara bilowga, ayaa ka mid ah qalabka la yimaada Avast Free Antivirus.
Astaamaha Antivirus Avast
Antivirus: Falanqaynta caqliga waxay ogaataa oo xirtaa fayrasyada, malware, spyware, ransomware, iyo khiyaanooyinka been abuurka ah.
Gaashaanka Habdhaqanka: Wuxuu kaa ilaaliyaa hanjabaadaha eber-maalin iyo ransomware adoo ogaanaya astaamaha habdhaqanka shaki leh.
CyberCapture: Keliya faylalka aan la aqoon. Sidaa darteed, faylasha waxaa lagu falanqeyn karaa daruuraha si loo goaamiyo inay nabad qabaan iyo in kale.
Anti-Phishing: Si otomatig ah ayuu uga hortagaa khayaanada iyo boggaga beenta ah, looma baahna kordhinta biraawsarka (plugins).
Kormeeraha WiFi: Wuxuu ka ilaaliyaa haakarisku si otomaatig ah inuu ku ogaado daciifnimada shabakadda wirelesska gurigaaga.
Cusbooneysiinta Sooftiweerka: Waxay haysaa barnaamijkaaga casriga ah si loo hagaajiyo nuglaanta amniga iyo hagaajinta waxqabadka.
Furaha sirta ah: Dhammaan xisaabaadkaaga ku xafid hal erey oo sir ah.
Nadiifinta Mashiinka: Ka saar qashinka qalabka iyo waxyaabaha kale ee aanad rabin ama u baahnayn biraawsarkaaga.
Soo Celinta Disk: Ku samee sawir Disk Disk ah CD ama USB disk si aad u kortato marka nidaamka uu ku dhaco fayras ka hortagaya inuu bilowdo.
Isbedelada ku imaada Cusboonaysiinta Avast 20.10.2442
Ilaalinta Password-ka la dheereeyay - Hadda waxaan sidoo kale ku ilaalinaa furahaaga sirta ah noocyada beta ee daalacashada. (Chrome, Edge, Firefox iyo Browser AVG oo Sugan - Noocyada Lacagta Kaliya)
Dib u soo kabashada Disk Disk - Windows 7 isticmaalayaashu way u dabaaldegi karaan iyagoo ogaanaya in muuqaalkani mar kale u shaqeynayo iyaga, waxaanan horumarinay waxqabadkiisa waxaanan hubinay inay si habboon u nadiifinayaan .DLLs khuseeya dhammaan isticmaaleyaasha.
Dayactirka cayayaanka - Kaliya hagaajinta cayayaanka ee ka dhigaya antivirus-kaaga mid xoogan
Maxaa Ku Cusboonaysiiyay Cusboonaysiinta Antivirus Bilaashka ah ee Avast 20.9.2437
Qabashada CyberCapture - Ma seegtay ogeysiis? Hadda waxaad arki kartaa dhammaan natiijooyinka feylasha laga shakiyo ee aad u soo gudbisay shaybaarradeena Hanjabaadda ee xarunta ogeysiiskaaga
Badbaadinta ereyga isku-dhafan - Marka laga soo tago Chrome iyo Opera, hadda waad isgaran kartaa ereyga sirta ah ee Microsoft Edge iyo kan aan jecel nahay, Avast Secure Browser.
U codee astaamaha - U codee astaamaha mudnaanta leh ee aad ugu jeceshahay ama u soo gudbi fikradahaaga astaamaha cusub. Booqo Meesha> Ku saabsan una sheeg Avast dookhaaga (kaliya waxaa heli kara isticmaalayaasha Premium)
Waxqabadka hagaajinta - Qaybahaaga fayrasku hadda way xawli doonaan xitaa si dhakhso leh taas oo ay ugu wacan tahay rarka isku mar ee adeeggayaga iyo VPS.
Taageero marin-helis fog
Iskuxirka muuqaalka Turkiga
Isticmaal bilaash ah
Avast Free Antivirus 2021 Noocyada
Cabirka Faylka: 0.22 MB
Horumar: AVAST Software
Wararkii Ugu Dambeeyay: 11-07-2021
McAfee Rootkit Remover waa codsi guulaystay oo ka caawiya dadka isticmaala inay ogaadaan oo...
Waa maxay Tor Browser? Tor Browser waa biraawsar internet lagu kalsoonaan karo oo loo sameeyay...
Ilaali My Disk waa softiweer amni oo lacag laaan ah oo kuu oggolaanaya inaad ka ilaaliso ulahaaga...
Norton AntiVirus waa barnaamij xallin amni oo xirfad leh oo bixiya difaac horumarsan oo ka dhan ah...
Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free) waa antibiyootiko bilaash ah oo dhaqso badan oo...
Avira Free Antivirus waa antibiyootiko awood badan oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka...
Avast Free Antivirus, oo bixisa nidaamka difaaca fayraska bilaashka ah ee kombiyuutarada aan ku...
AVG AntiVirus Free waxaa halkaan ku yaal nooc cusub oo qaadaya boos yar isla markaana yareynaya...
Xakamaynta Firewall -ka ee Windows waa codsi yar oo fidiya shaqaynta Windows Firewall -ka wuxuuna...
Haddii aad raadineyso app si aad u dillaacdo lambarka Aqoonsiga Apple ama aad u dillaacdo Password...
Codsi lagu ogaanayo barnaamijyada nooca Keylogger ee kugu sababa inaad keydiso xogta lagu geliyey...
Kaspersky Wadarta Amniga ayaa ah tan ugu waxqabadka badan, qaybta amniga ee la doorbido....